Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Instagram Nhau | Martech Zone
Chitatu, December 13, 2017 Chitatu, September 2, 2020 Douglas Karr
Instagram ine Mamiriyoni mazana mashanu evashandisi vezuva nezuva uye ine mukana unoshamisa webhizinesi rako, kunyanya kana kambani yako yatora iyo Instagram Stories chimiro. Waizviziva here 20% yebhizimisi gamuchira yakananga mameseji semhedzisiro yeNhau? muchokwadi, 33% yenyaya dzese dzakakurumbira dzinoiswa nemabhizinesi!
Chii chinonzi Instagram Nyaya?
Instagram Nyaya dzinobvumidza mabhizinesi kugovana zvinoonekwa nyaya yezuva ravo, rakaumbwa nemifananidzo yakawanda uye mavhidhiyo.
Chokwadi nezve Instagram Nhau
Yakareba sei Instagram Nyaya? Masekondi gumi nerimwe.
Inguva yakareba sei pamberi peNhau dze Instagram dzanyangarika? Ivo vanoonekwa kwemaawa makumi maviri nemana chete.
Nhau dze Instagram dziri paruzhinji? Ivo vanotevera mvumo iwe yawakagadzirira yako profil.
Ndeupi mhando wevhidhiyo unogona kuiswa pa Instagram Nhau? MP4 fomati ine H.264 Codec & AAC odhiyo, 3,500 kbps vhidhiyo bitrate, 30fps furemu chiyero kana pazasi, 1080px yakafara, uye yakakwira fairaize muganho we15mb.
Unogona kushandisa musanganiswa wemifananidzo, mavhidhiyo, uye boomerang mune yako Instagram Nyaya.
Mazano ku Instagram Nyaya Kubudirira
Izvi zvakadzama infographic kubva Musoro Wepamusoro inofamba iwe kuburikidza kwete kungoita nyaya, asi kupfuura kuvaka iyo Instagram zano. Heano mamwe matipi ekubudirira.
Ronga kubatana nzira kuti utore zvinhu zvese zvaunoda kuti ugadzire nyaya yaunoda.
Sarudza a nguva uko vateveri vako vari kuita.
Gadzira kuchinja mumasekonzi mana ekutanga kuti muoni wako agare kune imwe nyaya yese.
Pfura nyaya yako vertic - vateereri vako vachange vachizviona sei.
shandisa geotagging kuunganidza 79% yakawanda yekuita pamwe nekutarisa kwedunhu.
Gadzira yakapusa museve kuti vataridzi vatsvaire kuti vatevere kuwebhusaiti yako.
Inosanganisirwa yakatariswa hashtags saka nyaya dzako dzinosanganisirwa muzvindori zveNhau.
Shandisa app senge Cuttory kucheka nyaya yako kuita nhevedzano.
Pedzisa nyaya yako ne solid kudana-ku-kuita kukurudzira kubatanidzwa.
Funga nezvekuwana zvekunze kuchinja kutora nyaya yako, izvi zvinowedzera kubatanidzwa neinosvika 20%!
Shandisa Nhau 'zvisina kujairika hunhu kuvaka hukama uye kupa shure kwezviitiko tarisa bhizinesi rako.
Ipai vateereri veNhau nemamwe zvipo saka unogona kuvatevera uye kuvapa mubairo wekuvimbika kwavo.
Shandisa Nhau kupusha a chisarudzo kunze kwevateereri vako vachishandisa chinamirwa chekuvhota. Chengeta ipfupi uye inotapira, iwe unongova nemavara 27!
Nhau dze Instagram dzakakura zvakanyanya kubva payakatangwa muna Nyamavhuvhu 2016, uye kuona kuti unganyatsoishandisa sei ichave iri bhenefiti yakakura kune ako enhau enhau kushambadzira. Wakamirira chii? Tanga kuudza Nyaya yako izvozvi. Nivine kubva kuHeadway Capital
Heano makuru infographic, Bhuku Diki Diki Rekutungamira kune Instagram Nhau:
Tags: Instagraminstagram storiesKushambadzira Vhidhiyonyaya